filozofia, tsy fantatra | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: filozofia, tsy fantatra
Ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fahampian-tsakafo, inona no tokony hatao?
Tsy fahitan-tory sy tsy fahampian-tsakafo, inona no hatao? Mety nifankatia ve ianao? Ary misy eritreritra maro samihafa manenjika anao? Na manana olana amin'ny asa ianao izay tsy hainao ny mamaha azy, fa ...
Inona no nataon'Andriamanitra talohan'ny namoronana izao rehetra izao sy ny zava-drehetra?
Inona no nataon'Andriamanitra, inona no nataon'Andriamanitra talohan'ny namoronana an'izao rehetra izao sy ny zava-drehetra? Jesosy Kristy dia milaza ao amin'ny Soratra Masina thatquot; misy fonenana maro ao an-tranon'ny Raiko. Araka izany, omena antsika rehetra ny fanantenana ...
Tsy tiako ilay orinasa mihitsy. Ara-dalàna ve izany?
Tsy tiako mihitsy ny orinasa. Ara-dalàna izany? Normal io, io no toetranao. Azo inoana fa introvert ianao - mifantoka amin'ny tontolo anaty anao ianao, ny hafa fotsiny no ahitanao ny hafa, ...
Nahoana ny ankamaroan'ny olona no miditra amin'ny fiarahamonina?
Fa maninona ny ankamaroan'ny olona no mirona amin'ny fiaraha-monina? Raha miresaka momba ny foto-kevitry ny lena ie ekeo ny fomba fijerin'ny maro an'isa mba hahafaly ny hevitrao, avy eo misy lafin-javatra lehibe maromaro ary quot; severityquot; fiviliana. (...
Marina ve fa efa mijery (cm) isika?
Marina ve fa arahintsika (cm) isika? Mijery izy ireo ary manara-maso mihitsy aza, ny zava-drehetra sy izay afaka, afaka, mitaona na manova, eo amin'ny sehatry ny fanjakana, inona no ilana hijerena ireo mponina tsy misy dikany ...
Mahita ny tontolo misy azy amin'ny fomba samihafa ve ny olona rehetra?
Samy hafa ve ny fahitan'ny tsirairay ny tontolony? Eny. Samy manana ny tontolony avy ny tsirairay. Tsy afaka mahita ny iray hafa izy ary tsy te hahita. Rehefa dinihina tokoa, isika rehetra samy manana ny masony. Ho toy izany ihany, tsy ...
Ahoana ny manaiky ny fahatsapana ho manirery?
Ahoana no hiatrehana ny fanirery? Aza mandefitra amin'izany fa mila mankafy fiainana fotsiny. Hihaona matetika amin'ireo olon-tianao, mandehana amin'ny natiora, mandehandeha bebe kokoa ary mihaona olom-baovao. ...
Iza marina i Julia Wang?
Iza marina i Julia Wang? Latvian tokoa i Julia, tsy pseudoanim i Julia Vladimirovna Vagn, fa tena anarana. Teraka tamin'ny 29 Oktobra 1981 ity zazavavy ity. Nahazo diplaoma tamin'ny GITIS Moskoa. Nandray anjara mavitrika tamin'ny filalaovana ...
Raha nilaza ianao nefa tsy nieritreritra dia nilaza ny hevitrao ianao?
Raha nilaza ianao nefa tsy nieritreritra dia nilaza ny hevitrao ianao? Tena tsy zava-misy. Fa tsy nanam-potoana handrafetana eritreritra tao an-dohany ilay olona, ​​ary efa nanomboka niteny daholo ny vavany ...
Niteraka virijina ve i Maria niteraka an'i Jesosy?
Maria izay niteraka an'i Jesosy dia nijanona ho virijiny? Eny, i Maria Virjiny tsy misy ifandraisany. Izy tenany ihany no nanamafy izany tamin'ny fisehoan'i Saint Bernaendetta Soubirou tao Lourdes. Ka sazala -quot; Izaho no Conception Immaculate; Ary nanomboka ...
Inona ny finoana silamo?
Inona no atao hoe Finoana Finoana? Toa ahy fa ny finoana dia fanatisme. Satria, ny fivavahana sy ny finoana dia tsy mifandray. Ny olona iray dia mety ho mpivavaka, tsy ho diso anjara fanompoana na iray aza, ...
Te ho lasa superman?
Te ho lasa superman ve ianao? Ny olombelona eto an-tany sy mety maty dia tsy nahazo afa-tsy 10% ny faharanitan-tsaina. Midika izany fa ny ampahafolon'ny zavatra azo atao dia mitoetra ao amin'ny asan'ny ati-doha ...
Inona no manazava ny masoandro amin'ny alina?
Inona no iposahan'ny masoandro rehefa manana alina isika? Raha ny marina, ny Masoandro dia manohy manazava ny zava-drehetra eo amin'izao rehetra izao, izay ataony foana, satria malalaka be io. Ny antsika fotsiny, izany hoe, ny planeta Tany ...
Inona no manirery anao?
Inona no manirery ho anao? Manirery ... ity rehefa mody ianao, ary tsy misy miandry any an-trano. Rehefa matory ianao, ary tsy misy mifamihina, miresaka. Rehefa tsy misy miantso sy mizara vaovao mahatalanjona. Rahoviana…
Amin'ny andro inona ny devoly dia mavitrika sy mahery?
Andro firy no miasa sy matanjaka indrindra ireo fanahy ratsy? Hizara ny vaovao izay vitako manokana nanangona. voalohany. Ity no alina alohan'ny Krismasy - Alin'ny Krismasy ary Krismasy manaraka. Amin'ireto…
Inona no mahavariana momba ny toetran'i Grigory Rasputin amin'ny tantara Rosiana?
Inona no miavaka amin'ny toetran'ny Grigory Rasputin eo amin'ny tantaran'ny Rosiana? Rasputin dia famantarana (ary mariky ny ankehitriny koa) ny fahasimban'ny autokrasia. Tamin'ny fiezahana hamonjy ny tenany amin'ny fianjerana tsy azo ihodivirana, dia nanjary tamin'ny fomba tsy mitombina indrindra ...
Hatramin'ny firy taona no antsoin'ny olona hoe "tovolahy", "zazavavy"?
Hatramin'ny firy taona no antsoin'ny olona hoe "tovolahy", "zazavavy"? Ny zava-drehetra eto dia olona irery. Heveriko fa ny fisehoan'ny olona iray no lafiny lehibe indrindra, hiankina amin'ny olona ...
Nahoana ny olon-drehetra dia manana fialantsasatra, fa tsy misy fialan-tsasatra Zack?
Fa maninona no misy fialantsasatra ho an'ny rehetra, fa tsy misy fialantsasatra Zek? Tsy ny sokajy olom-pirenena rehetra no manana fialantsasatra manokana! Ka tsy mbola naheno momba ny fety aho; Andron'ny fetin'ny fako; ...
Firy ny tsy mpino tsy mpino eto an-tany no mpino?
Firy ny olona tsy mino an’Andriamanitra eto an-tany raha% ny mpino? Angamba latsaky ny antsasaky ny tena tsy mino an'Andriamanitra. Eo afovoany dia misy olona manana fivavahana antonony, agnostika, na olona efa zatra fisainana toa ny olon-drehetra ihany ...
Inona no azonao itiavana ny aina?
Inona no tianao amin'ny fiainana? Afaka mitia ny fiainana ianao satria manome antsika fotoana hiasa amin'ny tenantsika, satria manana ny fahafantarana zava-baovao ho an'ny tenantsika isika. ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 156 Next Page
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 3,071.